Herisetra… | NewsMada
Tao anatin’ny andro vitsivitsy izay, trangana herisetra telo no nisongadina sy nahatonga resabe. Tany Ihosy, asa na nentin’ny inona ilay “assistant parmementaire”, tsy solombavambahoaka akory, fa mpanampy, irakiraka no asany, kanefa dia nanampatra fahefana. Nahavita nikasi-tanana, namelaka tehamaina manamboninahitra ambony, kaomisera eo anivon’ny polisim-pirenena tany an-toerana. Fahasahiana tsy misy toa izany. Mbola vao “assistant” no asany amin’io. Mainka izany fa ambonimbony kokoa noho izany. Miseho azy ho tompon’ny hery sy fahefana angamba ? Izao anefa, sendra ny nahay azy ny anao lahy ka tany am-baravaran’ny mpamosavy no nanoko sikidy. Zatra ny lalan-dririnina, ela nitoratorahana ka nahavoa voamason’angatra.
Tahaka izany koa ireo roa lahy, nidaroka sy namono tsy nisy indra fo ireo mpivady nandeha moto, teny Ambodimita, Ambohimanarina. Hatramin’ny tovolahy iray mba niditra an-tsehatra nanasaraka avy no fanin’ny daka sy totohondry mandrivorivo… Tena goavana sy ranjanana tokoa aloha ry zalahy e. Manoatra noho ireny “gros bras” ampiasan’ny mpanao politika rehefa misy fihetsiketsehana ireny ny tombantombany. Izao anefa, nosamborin’ny polisy, ary hoe atolotra ny fampanoavana tsy ho ela.
Ilay fihetsiketsehan’ny mpianatry ny Lycée technique Alarobia, nikasa hanao valifaty tamin’ny mpianatry ny Lycée technique Mahamasina, omaly, indray… tsy mahagaga loatra, na nanaitra ny maro aza. Zary nampalaza ratsy ireo lycée technique roa ireo sy ny etsy Ampefiloha ny herisetra sy ny rombo tahaka izao. Efa an-taona maro izay…
Mafana tokoa ny andro, mitambesatra loatra ny vesatra ateraky ny olana ara-tsosialy. Ny vidim-piainana tsy mitsaha-miakatra, ny rano tsy mandeha na maloto, ny fahatapahan-jiro tsy misy farany, ny tsy fandriampahalemana hatraiza hatraiza… Manginy fotsiny ny tebiteby noho ny firongatry ny valanaretina. Tsy mahagaga raha mirongatra manaraka izany ny herisetra etsy sy eroa, na tsy toa inona loatra aza ny mahatonga izany. Raharaha !!!